Mariin Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii miira gaddaan eegalame – Fana Broadcasting Corporate
Mariin Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii miira gaddaan eegalame
Finfinnee, Bitooteessa 2, 2011 (FBC)- Mariin DhaabbanniMootummoota Gamtoomanii guyyaa har’aa Keeniyaa magaalaa Naayroobiitti dhimma kunuunsa naannoorratti qopheesse miira gaddaan eegalame.
Guyyaa kaleessaa xiyyaarri Booyiing 737 Maaks 8 lakkoofsi balalii isaa Et-302 kufee caccabee namoonni achi keessa jiran 157 lubbuun isaanii kan darbe yoo ta’u, lammiileen lubbuun darbanis lammiilee biyyoota 35 ta’uun ni yaadatama.
Mariin Naayroobii calqabuun duras namoonni maatii isaanii fi hiriyoota hojii isaanii dhaban miira gadda isaanii wal jijjiiraa turan.
Marichis kan eegalame erga namoota lubbuu isaanii dhabaniif yaadannoon sammuu daqiiqaa 1 taasifameefii booda ta’uu dubbatameera.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii namoota 157 balichaan lubbuun darban keessa hojjattoonni isaa 22 ta’uu ifa godheera.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii lakkoofsi miseensota isaa lubbuun darbanii 22 jedhee gabaasus lakkoofsi miseensota dhaabbatichaa lubbuun darbanii dabaluu danda’as jedhamee dubbatamaa jira.
Miseensonni Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii lubbuun darban kunneenis hojjattoota Sagantaa Nyaataa Idil Addunyaa, hojjattoota Dhaabbata Dhimmoota Godaansa Idil Addunyaa fi hojjattoota Koomishinii Godaansa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii ta’uu ibsameera.
Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii ibsa mariichaan dura baaseen akka ibseetti, balaa dhaqqabeen gadda itti dhaga’ame ibsee, alaabaan dhaabbatichaa akka gadi siiqee mirmirfamu murteesseera.